December 16, 2014 December 16, 2014 biyacade
Waxaa soo kordhay In Cumar cabdi rashiid ra’isul waraase loo magacaabi doono.
Madaxweeynaha soomaaliya oo danahiisa ka dhex arkay cumar cabdi rashiid oo jecel daawshada ciyaaraha aadna u taageero arsenal ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa in loo magacaabo ra’isul wasaaraha soomaalia.
Cumar cabdi rashiid oo saakay ay keentay diyaarad khaas ah ayaa waqtigaani ku sugan hoteelada muqdihso mid kamid ah.
Cumar cabdi rashiid ayaa ahaa ra’isul wasaarihii sowladii shariif shiikh axmed ee 2009 kii asagaa xilka iska casilay 2010 kii.
Cabdi rashiid cali sharmaake allaha u naxariiste oo ahaa aabaha Cumar cabdi rashiid ayaa noqday madaxweeyne iyo ra’isul wasaare 1964 ilaa 1967.
Dadka saadaaliya siyaasada soomaaliya ayaa sheegay in Cumar cabdi rashiid uusan ahaan doonin qaabkii lagu bartay
Ayadoo laga yaabo in ay siyaasada dalka ay gasho xaalad ka xun tii Cabdi wali shiikh oo Xasan shiik ka waayay danahii ururka DAAMJADIID.
Previous Sedax sheey qofkii daaimtaa cudur aan la’ aqaanin baa dila
Next Ma dooneeysaa in aad Noqoto Ahlul janna hadii ay jawaabtu haa tahay Daawo sawirka oo sameey maalinti intaan jeer